Soomaaliya: Médecins Sans Frontières (MSF) waxa ay dhammaan dhinacyada ugu baaqaysaa in ay ixtiraamaan dhex-dhexaad nimada goobaha caafimaadka. - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Jineefa 22 Juunyo 2012:
Médecins Sans Frontières (MSF) /Dhaqaatiirta aan Xudduudda lahayn (MSF) waxa ay aad ugu walaacsan tahay arrin 16kii Juunyo ka dhacday cusbitaalcusbitaal ay taageerto MSF ee magaalada Baladweyne, Soomaaliya.
Dhex-dhexaadnimada cusbitaalka Beled Weyne ayaa meel looga dhacay markii xubno ka tirsan wefti booqasho ku yimid oo ka mid ah maamulka degaanka, oo ay ku jiraan ciidamo hubeysan, ay soo galeen goobta iyaga oo aanan wareejin hubkoodii. Tani waxa ay la micna tahay in aanan la tixgelinin borotokoolka caalamiga ah ee la qadariyo oo xaqiijinayo in ay goobaha caafimaadka ka marnaadaan wax hub ah. Intaasi waxa u dheer in xubno weftigii ka mid ah ay filim ka duubeen ayna sawirro ka qaadeen bukaankii iyo shaqaalihii iyaga oo aanan oggolaansho ka helin. Jebinta borotokoolkani waxa ay sababtey xiisad weyn, tani oo keentay in muddo kooban xabsiga la dhigo qof shaqaale ah oo ka tirsan MSF. Arrinta ayaa la xalliyey iyada oo gacan laga helay maamulka degaanka.
“MSF waxa ay dhammaan dhinacyada Soomaaliya ku boorrrinaysaa in ay qaddariyaan ayna ilaaliyaan goobaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka, waxaana aan ka dalbaneynaa in maamullada ay sameeyaan wax walba oo karaankooda ah sidii ay ugu oggolaan lahaayeen shaqaalaha caafimaadka in ay u qabsadaan howlahooda. Marka
aad bixinayso daryeel caafimaad, waxa muhiim ah in la qaddariyo macluumaadka khaaska ah ee bukaanka iyo shaqaalaha” sidaasi waxaa tiri Monica Rull, Maamulaha Barnaamijka MSF.
MSF waxa ay mar kale celinaysaa baaqeeda ay u direyso dhammaan dhinacyada oo ah in ay tixgeliyaan dhex-dhexaadnimada iyo dhinac u xaglin la’aanta goobaha caafimaadka.Filim ka duubidda iyo sawir ka qaadidda bukaanka
iyo shaqaalaha oo ay sameynayaan ciidamo hubeysan waxa ay jebinaysaa qarsoodinimada, waxa ayna ku xadgudbeysaa sharafta shaqsiga. Ixtiraamidda bukaankeenna waxa ka mid ah in aan la duubin ama aan la sawirin iyada oo aanan oggolaansho buuxa laga helin iyaga. Qarsoodida arrimaha bukaanka waxa ay ka mid tahay anshaxa caafimaadka.
MSF waxa ay adeegyo caafimaad oo lacag la’aan ah ka bixisaa dhammaan gobollada dhexe iyo kuwa koonfurta ee Soomaaliya. Cusbitaalka 108da sariirood qaada ee ku yaallo Beled Weyne ee gobolka Hiiraan, MSF waxa ay adeegyo caafimaad oo lacag la’aan ah siisaa 70,000ka ee qof oo deggan magaalada. Isla markaasina waa cusbitaalka loo soo
gudbiyo 120,000 qof ee ku nool degmada . 2011kii waxa qolka xaaladaha deg-degga timid 21,000 oo bukaan ah, 2800 na waxa la seexiyey cusbitaalka. In ka badan 800 haween ka badan ayaa looga ummuliyey cusbitaalka 1500 oo qallinna waa la sameeyey. 1500 carruur oo la il-darnaa nafaqa-xumo ayaa lagu dabiibay barnaamijka quudin-ku-daweyn ee MSF.
Oktoobar 2011kii, labo shaqaalaha gargaarka ee MSF ka mid ah, Montserrat Serra iyo Blanca Thiebaut ayaa lagu afduubtay xerada qaxootiga Dhadhaab ee Waqooyiga Kenya iyaga oo u qabanayo gargaar deg-deg ah dadka
Soomaaliyeed. Ilaa hadda waa la haystaa, MSF na waxa ya hakad gelisay in mashaariic cusub oo aan ahayn kuwa deg-deg ay ka furto Soomaaliya ilaa laga soo sii daayo. MSF waxa ay si adag u door bidaysaa in si nabad ah lagu xalliyo arrimaha noocaas oo kale ah, maaddaama adeegsashada xoog ay halis gelinayso noolasha la haystayaasha.
MSF waxa ay hadda 13 mashaariic oo ka waddaa Muqdishokoonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya iyo Somaliland.
Guud ahaan sanadkii 2011kii Médecins Sans Frontières (MSF) waxa ay mashaariic caafimaad ka wadday ilaa 22 goobood oo kala duwan oo ku yaalla Soomaaliya, iyo sidoo kale barnaamijyo waaweyn oo ay ka wadday xerooyinka qaxootiga Soomaalida ee Kenya iyo Itoobiya. MSF waxa ay si joogta ah uga shaqeynaysay Soomaaliya tan iyo 1991gii waxa ayna ku tiirsan tahay oo keli ah deeeqo sadaqo oo gaar ah hawsha ay ka waddo Soomaaliya mana aqbasho wax maaliyad ay dowlad siiso.